Thwebula Pidgin 2.11 – Vessoft
Pidgin – a isofthiwe ukuxhumana nabangani bakho ku-inthanethi. Isofthiwe isekela Izivumelwano popular: ICQ, AIM, Google Talk, MSN, Bonjour, XMPP, Yahoo !, IRC, njll Pidgin kwenza ukushintshanisa amafayela, evulekile kwamathebhu eziningana emafasiteleni engxoxweni futhi uhlanganise oxhumana nabo eqenjini ovamile. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukuxhuma kwi-akhawunti ahlukene kanyekanye. Pidgin iqukethe amathuluzi anhlobonhlobo kwamukeleke, okungase ukunwetshwa kakhulu ngokuxhuma i anezele ehlukahlukene. Isofthiwe has a esibonakalayo elula futhi enembile.
Usekela Izivumelwano kakhulu
Ixhuma kokulandisa ezahlukene ngesikhathi esisodwa
Ukuhlanganisa koxhumana nabo metacontacts
Amazwana on Pidgin:
Pidgin Ahlobene software:
Chat Iklayenti ukuxhumana futhi ukushintshanisa amafayela inethiwekhi IRC. Isofthiwe uhlola abasebenzisi evimbela ukulandwa amafayela ezinonya inethiwekhi.
English, Español, Deutsch, Português... Battle.net 1.11.4.2368
abahleli Isofthiwe ukwenza izinhlu umsebenzi futhi sihlele ukuphila kwansuku zonke. Isicelo isekela umsebenzi namaphepha takhiwo athandwayo kanye nokuqukethwe nezinhlobo ezahlukene.
English, Українська, Français, Español... PeaZip 6 Standard futhi Portable
Amafayela Isofthiwe ukulanda futhi ulayishe amafayela inkonzo ifayela-ukwabelana. Futhi isicelo usenza ukuphatha kalula amafayela isitoreji ifu.